တရုတ်တွေ နီတုန်းလား…. – Min Thayt
Min Thayt August 14, 2019 August 15, 2019
တရုတ်တွေ နီတုန်းလားဆိုတာကို နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်။ တရုတ်တွေဟာ ရဲရဲတောက်ကွန်မြူနစ်တွေ ဖြစ် နေတုန်းလားဆိုတာကို ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်တွေဟာ နီခဲ့တယ်။ ရဲခဲ့တယ်။ နီရမယ် ချွန်ရမယ်…. လို့တောင် ဆိုခဲ့ကြသေးတယ်မလား။ နောက်တော့ နည်းနည်း အသွင်ပြောင်းလာတယ်။ နီရင် အလိုလို ချွန်လာ မယ်… လို့တောင် ဆိုခဲ့ကြတယ်။ နောက်ဆုံးတော့… ချွန်စရာ မလိုဘူး…. နီရင်ရပြီ ဆိုတဲ့ အဆင့်တောင် ရောက်ခဲ့မလားပဲ။
တရုတ်ကွန်မြူနစ်တွေဟာ ၊ တော်လှန်ရေးပေါင်းများစွာကို ဖြတ်သန်းခဲ့တယ်။ တရုတ်တွေက ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ကို လည်း တိုက်ခဲ့တယ်။ ဖက်ဆစ်ဂျပန်ကိုလည်း တိုက်ခဲ့တယ်။ အမေရိကန်အားပေးတဲ့ တရုတ်ဖြူကိုလည်း တိုက်ခဲ့တယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း တရုတ်ဖြူနဲ့ တရုတ်နီအကြား ပဋိပက္ခက ပိုကြီးခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး တရုတ်ဖြူ ကူမင်တန်တွေ ထိုင်ဝမ်ကျွန်းမှာ ကျောက်ချပြီး၊ အမေရိကန်အကာအကွယ်နဲ့မှ၊ သူတို့ရဲ့ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခက အဆုံးသတ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေးအရတိုက်ပွဲတွေက မပြီးဆုံးခဲ့ဘူး။ နိုင်ငံ တကာ ဇာတ်ခုံပေါ်အထိ၊ တရုတ်ဖြူနဲ့ တရုတ်နီတွေအကြား ပဋိပက္ခကဖြစ်နေတုန်းရှိသေးတယ်။
တရုတ်တွေဟာ နိုင်ငံခြားအစိုးရတွေနဲ့ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကို လုပ်ခဲ့တယ်။ ပြည်တွင်းမှာလည်း တရုတ် အချင်းချင်း လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလုပ်ခဲ့တယ်။ တရုတ်ပြည်ထူထောင်ပြီးနောက်ပိုင်း နောက်ထပ် တော်လှန်ရေးတွေ ထပ်လုပ်တယ်။ လူမှုတော်လှန်ရေးတွေလို့ ပြောလို့ရမယ်။ ဓနဥစ္စာတော်လှန်ရေးတွေလည်း လုပ်ခဲ့တယ်။ စီးပွားရေးစီမံကိန်းကြီးတွေ အကောင်အထည်ဖော်တယ်။ လယ်ယာ၊ စက်မှု၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု…. စသည်ဖြင့်။
ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးကြီးကလည်း အထင်အရှားပါပဲ။ ပန်းပေါင်းတစ်ရာပွင့်ပါစေ… အတွေး အခေါ်ပေါင်း တစ်ရာ ပြိုင်ကြစေ…. ဆိုတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကလည်း အထင်ကရဖြစ်ခဲ့တယ်။ တရုတ်ပြည်တွင်းမှာ လူမှုတော်လှန် ရေးတွေ၊ ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးတွေကို လုပ်ခဲ့သလို၊ အိုင်ဒီယော်လိုဂျီ သန့်စင်ရေးတွေလည်း လုပ်ခဲ့တယ်။ ပါတီတွင်း အားပြိုင်မှုတွေကနေ လာတဲ့ တော်လှန်ရေးတွေလို့ ဆိုနိုင်က ဆိုနိုင်တယ်။
ပါတီတွင်း အားပြိုင်မှုတွေက အစိုးရတွင်းကိုမှာလည်း သက်ရောက်မှု ရှိတယ်။ စစ်တပ်အတွင်းမှာလည်း သက်ရောက်မှု ရှိခဲ့တယ်။ တရုတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာလည်း သက်ရောက်မှု ရှိခဲ့တယ်။ တရုတ်ပြည်ရဲ့ တော်လှန်ရေးခရီးတွေကို ကြည့်လိုက်ရင်၊ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မှားယွင်းမှုတွေလည်း ကြုံခဲ့တယ်။ ကြီးကြီး ကျယ်ကျယ် လုပ်ရပ်တွေလည်း ရှိခဲ့တယ်။
တရုတ်နီတွေဟာ ၊ မက်(စ်) လီနင်ဝါဒကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့ မော်ဝါဒကို အတော်ကြီး ကိုးကွယ်ယုံကြည်ခဲ့ ကြတယ်။ တရုတ်ခေါင်းဆောင်ကြီး မော်စီတုန်းကိုယ်တိုင်ကလည်း၊ ဝါဒဖြန့်ချိရေးတွေလုပ်တယ်။ မော်စီတုန်း ရဲ့ လက်ရွေးစင်ကျမ်းတွေဟာ နာမည်ကြီးတယ်။ မော်စီတုန်းရဲ့ စာအုပ်နီကလေးတွေကို ၊ တပ်နီလူငယ်တွေ လက်ထဲမှာ တလူလူ လွှင့်နေခဲ့ဖူးတယ်။ ပိုစတာကမ်ပိန်းတွေနဲ့ မော်စီတုန်းရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဩဇာကို အရှိန်မြှင့် တယ်။ မော်စီတုန်းဟာ တော်လှန်ရေးတွေကို တန်ပြန်တော်လှန်ရေးတွေနဲ့ အသက်ဆက်သွားတယ်။
ပါတီတွင်းမှာ မော်စီတုန်းရဲ့ဩဇာအကျဘက် ရောက်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကာလတွေ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ မော်စီတုန်းဟာ၊ စတာလင်ရဲ့အဖြစ်ကို သင်ခန်းစာယူတယ်။ ဆိုဗီယက်မှာ၊ စတာလင်သေဆုံးအပြီး ခရူးရှက်က စတာလင်ဩဇာ ကို ရှုတ်ချတာတွေ လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ မော်စီတုန်းဟာ ပါတီတွင်း ဩဇာတည်ဆောက်ရေးမှာ ကျွမ်းကျင်တယ်။ သူ့ကို ကာပြန်မယ့်သူတွေကို ၊ တန်ပြန် တုံ့ပြန်ချက်တွေ လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ‘ဌာနချုပ်ကို အမြှောက်နဲ့ခွင်းကြ’ ဆိုတာ ဘာကို ပြောခဲ့တာလဲ။ ဆက်လက်လေ့လာဖို့လိုပါတယ်။
မော်စီတုန်းနဲ့ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်တွေ ဦးဆောင်ပြီး ဘုံစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တယ်။ စုပေါင်းလယ်ယာစနစ်တွေ၊ စုပေါင်းစက်မှုလုပ်ငန်းတွေ၊ စုပေါင်း ထုတ်လုပ်ရေးတွေကို အကောင်အထည်ဖော် ခဲ့တယ်။ တရုတ်ကွန်မြူနစ်တွေအကြားမှာ နာမည်ကြီးတာကတော့၊ အလုပ်စခန်းတွေ။ ကျေးလက် အလုပ်စခန်း တွေ။ အလုပ်စခန်းတွေကို ပို့ပြီး အိုင်ဒီယော်လိုဂျီ သန့်စင်ရေးတွေ လုပ်ခဲ့တယ်။ ပညာတတ်တွေကိုယ်တိုင် တောတွေကို ဆင်း၊ ဝက်ချေးကြုံး၊ နွားချေးကြုံး၊ ပေါက်ပြားကိုင်၊ မြေတူး၊ ထွန်စက်မောင်း…. စတာတွေ လုပ်ကြ ရတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း ပါတီက ပို့ချတဲ့ ကွန်မြူနစ်ဝါဒတွေကို သင်ကြားကြရတယ်။
တရုတ္ျပည္ကို စုစည္းေပးခဲ့သူ ေမာ္စီတုန္း
အားလုံးဟာ စုပေါင်းစားသောက်ကြရတယ်။ စုပေါင်း အိပ်စက်ကြရတယ်။ စုပေါင်းအလုပ်လုပ်ကြရတယ်။ ဘုံစနစ်ကို အပီအပြင် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တယ်။ ဆိုဗီယက်ယူနီယံကို (၁၀) နှစ်အတွင်း အမှီလိုက်မယ် ဆိုပြီး မဟာခုန်ပျံကျော်လွှားရေးစီမံကိန်းကြီးကို လုပ်လိုက်တာ၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတွေလည်းကျ။ မိုးခေါင် ရေရှားမှုတွေလည်းဖြစ်။ နောက်တော့ စားနပ်ရိက္ခာ ပြတ်လပ်မှုတွေပါ ကြုံရပြီး၊ တရုတ် (၁၀၀) မှာ အယောက် (၄၀) လောက် အငတ်ဘေးဆိုက်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေအထိဖြစ်ခဲ့တယ်။
မော်စီတုန်းရဲ့ အကျင့်က၊ တော်လှန်ရေးတွေကို လုပ်တယ်။ လုပ်ပြီး ပြန်ပြန်သုံးသပ်ပြီး ကြည့်တယ်။ သူ့ကိုယ် သူလည်း ကြည့်တယ်။ သူ့ပါတီကိုလည်း ကြည့်တယ်။ လူထုကိုလည်း ကြည့်တယ်။ သူ့ရန်သူတွေကိုလည်း အမြဲတမ်း လိုလို ကြည့်နေတယ်။ မော်စီတုန်းဟာ အမှားတွေ အများကြီး လုပ်ခဲ့သလို၊ အမှန်တွေလည်း အများ ကြီး လုပ်ခဲ့နိုင်တယ်။
တရုတ်ပြည် သမိုင်းကို ကြည့်လိုက်ရင်၊ တရုတ်ပြည်ကြီးကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း စုစည်းနိုင်ခဲ့တဲ့ ဧကရာဇ်တွေ က သိပ်များများစားစား မရှိဘူး။ မော်စီတုန်းဟာ ခေတ်သစ်ကာလမှာ အကွဲကွဲအပြားပြားနဲ့ စစ်မင်းတွေ ကြီးစိုး နေတဲ့ တရုတ်ပြည်ကြီးကို တစ်စုတစည်းတည်းဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဧကရာဇ်တစ်ပါးလို့တောင် ဆိုလို့ ရမယ်။
• တရုတ်ပြည်ကြီးကို စုစည်းပေးနိုင်ခဲ့သူက မော်စီတုန်း။
• တရုတ်ပြည်ကြီးကို ချမ်းသာစေခဲ့သူက တိန့်ရှောင်ဖိန်။
တိန့်ရှောင်ဖိန်ဟာ ၊ ကြောင်ဖြူကြောင်မည်း အဘိဓမ္မာကို ကြေညာပြီး တရုတ်ပြည်ကို ချမ်းသာအောင် လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ ချမ်းသာတာ မင်္ဂလာ… လို့ ပြောခဲ့တယ်။ ဆင်းရဲမွဲတေမှ ကွန်မြူနစ်လို့ ထင်နေတဲ့ တရုတ်နီ တွေကို တန်ပြန်လိုက်တဲ့သဘောပဲ။ တိန့်ရှောင်ဖိန်တက်လာတော့လည်း၊ အစပိုင်းမှာ တိန့်ရှောင်ဖိန်ဟာ သူ့ဩဇာ နိုင်ငံတွင်းမှာရော၊ ပါတီတွင်းမှာရော ပြန်တည်ဆောက်ရတာပါပဲ။ အစ်ကိုကြီး ချိုအင်လိုင်းကျေးဇူး ကြောင့် တိန့်လက်ထဲကို အာဏာရလာပေမယ့်၊ တိန့်ဟာ လေးဦးဂိုဏ်းကို နှိမ်နင်းခဲ့ရတယ်။ တိန့်ရှောင်ဖိန် အတွေးအခေါ်ကို ထူထောင်ခဲ့ရတယ်။
၁၉၈၀ နောက်ပိုင်းမှာ၊ တရုတ်ပြည်ဟာ မော်စီတုန်းဝါဒနဲ့ တိန့်ရှောင်ဖိန်အတွေးအခေါ် ပေါင်းပြီး ခရီးဆက်ခဲ့ တယ်။ မော်ဝါဒနဲ့ တိန့်အတွေးအခေါ်ဟာ ဆန့်ကျင်ဘက် မဟုတ်ကြောင်း၊ တိန့်ရှောင်ဖိန်က စည်းရုံးရေး အတော်လုပ်ခဲ့ရတယ်။
တရုတ်ခေါင်းဆောင် တိန့်ရှောင်ဖိန်ဟာ၊ တိုင်းပြည်ချမ်းသာဖို့ အရင်းရှင်စနစ် (ဈေးကွက်စနစ်) ကို သွတ်သွင်းခဲ့ တာဟာ ရဲရဲနီနေတဲ့ တရုတ်ပြည်အတွက် အချိုးအကွေ့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီအချိုးအကွေ့ဟာ သိမ်မွေ့လို့ ၊ တရုတ် တွေဟာ သူ့တို့ကိုယ်သူ သူတို့ အနီဗားရှင်းကို ပြောင်းပြီး မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့အထိ အောင်မြင်ခဲ့တယ်။
တိန္႔ေရွာင္ဖိန္ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာလာေသာ တရုတ္ျပည္
နောက်ပိုင်းမှာ တရုတ်ပြည်ဟာ ပိုပိုပြီး ချမ်းသာလာတယ်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ အကြီးအကျယ် ချမ်းသာ တဲ့အဆင့်ကို ရောက်လာတယ်။ တရုတ်တွေဟာ ပိုပြီးချမ်းသာလာလေလေ၊ ဈေးကွက်စီးပွားရေးရဲ့ သရုပ် သကန်တွေကို ပိုပိုပြီး နားလည်လာလေလေဖြစ်လာတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း သူတို့ ယုံကြည်သက်ဝင်ခဲ့တဲ့ ကွန်မြူနစ်ဝါဒကို ခေတ်သစ်အမြင်နဲ့ ချည်းကပ်ကြည့်မြင်မှုတွေ လုပ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။
တရုတ်နီတွေရဲ့ ကွန်မြူနစ်ကောက်ကြောင်းဟာ အင်မတန် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ တရုတ်ကွန်မြူနစ် တွေအတွက် သမိုင်းမှတ်တိုင် အကွေ့အဝိုက်လေးတွေ တစ်ခုမက ကြုံခဲ့တယ်။ အခုအချိန်ထိ တရုတ်မှာ ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ ဩဇာဟာ အထွတ်အထိပ်မှာ ရှိနေတယ်။ ပါတီကိုယ်တိုင် တပ်နီတော်ကိုလည်း ချုပ်ကိုင် ထား နိုင်တယ်။ ပါတီကိုယ်တိုင်က ၊ ဈေးကွက်နဲ့ နိုင်ငံတော်ယန္တရားကို ချုပ်ကိုင်ထားနိုင်တယ်။
လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရေစီအသံ ဆူဆူညံလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတောင်၊ တရုတ်တွေဟာ ဒီမိုကရေစီကို မငြင်းပယ်ဘဲ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ဗားရှင်း ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဘယ်လိုဖြစ်ကြောင်း…. ပါတီနဲ့ တရုတ်ပြည်သူလူထုကို ချပြ အသက် သွင်း၊ စည်းရုံးနိုင်ခဲ့တယ်။ ချမ်းသာလာတဲ့ တရုတ်နီတွေဟာ ကွန်မြူနစ်ဝါဒကို တရားသေဆုပ်ကိုင် ထားတာ မလုပ်ခဲ့ကြဘူး။ အနောက်ကမ္ဘာကို ယှဉ်ပြိုင်လာနိုင်မယ့် ဩဇာကို တည်ဆောက်လာနိုင်ကြတယ်။ ဓနဥစ္စာဖန်တီးနိုင်ခဲ့ခြင်းဟာ တရုတ်ကွန်မြူနစ်တွေကို ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စဖြစ်တယ်။
• တရုတ်တွေ နီနေပါသေးတယ်။
• သို့ပေမယ့်… ယခင် အနီမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဓနဥစ္စာနဲ့ ယှဉ်တွဲတဲ့ အနီဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်တွေ ဆက်လက်ပြီး နီနိုင်သေးတာ ဓနဥစ္စာဖန်တီးနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူလူထုကို ဓနဥစ္စာ အပ်နှံထားနိုင်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ ယုံကြည်မှု ပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ ဝါဒ၊ အယူအဆပဲဖြစ်ဖြစ် ဓနဥစ္စာနဲ့ မယှဉ်တွဲပေးနိုင်ရင် တစ်ချိန်ကျတော့ ကျဆုံးကြတာ ထုံးစံပါပဲ။
တရုတ်တွေ ဆက်လက်နီနိုင်ဖို့ ကျေးဇူးပြုထောက်ပံ့သူကတော့ မက်(စ်) ဝါဒ မဟုတ်ပါဘူး။ တရုတ်တွေ တစ်ချိန်က ရန်သူလို့ သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ အရင်းရှင်ဝါဒက ကျေးဇူးပြုထောက်ပံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်တွေ ဆက်ပြီးနီအောင် လုပ်ပေးတာ မက်(စ်)ဝါဒ မဟုတ်ပါဘူး။ အရင်းရှင်ဝါဒဖြစ်ပါတယ်။ အရင်းရှင်ကို အရင်ရှင်းလို့ ယူဆခဲ့ကြတဲ့သူတွေရဲ့ ဇာတ်သိမ်းဟာ မလှခဲ့ပါဘူး။ မြန်မာပြည်ဟာ သင်ခန်းစာပါပဲ။
ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကို နိဂုံးချုပ်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တာ အရင်းရှင်ဝါဒ မဟုတ်ပါဘူး။
လက်ဝဲဝါဒနယ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ဆိုရှယ်လစ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီကို ကျဆုံးအောင် လုပ်ခဲ့တာက အရင်းရှင်ဝါဒက တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ အရင်းရှင်ဝါဒကို မပွေ့ဖက်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နီတွေဟာ အရင်းရှင်ဝါဒကို ပုံစံပြောင်းပြီး ပွေ့ဖက်နိုင်ခဲ့လို့၊ အခုအချိန်ထိ တရုတ်တွေ နီနိုင်နေတာပါ။
ပြည်သူတွေကို ဓနဥစ္စာဖန်တီးခွင့် မပေးတဲ့ ဘယ်အစိုးရမဆို နိဂုံးချုပ် ကျဆုံးမှာ မလွဲဧကန်ဖြစ်ကြောင်း…. တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ည ၁၀း၂၇
၁၄ ၊ ဩဂုတ် ၊ ၂၀၁၉ ။
တီယံမင္ ရင္ျပင္ေပၚက ျမင္ကြင္း
Tagged China, China History, Communist China, Deng Xiaoping, Red China
Previous post ၈၈ နှောင်းပိုင်း မျိုးဆက်
Next post ချိုင်းနားရီဗျူး